आदेश उल्लङ्घन गर्ने तीन सय गाडी नियन्त्रणमा
सरकारसँग कांग्रेस सभापतिको आग्रह : परिस्थितिको समीक्षा गर्दै युद्धस्तरमा अघि बढौँ
लकडाउनले सिर्जना गरेको यो बाध्यता !
‘कोरोना भाइरस उपचार कोष’लाई पूर्व श्री ५ का तर्फबाट २ करोड प्रदान
निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बहाना बनाएर कोरोना सङ्क्रमणको उपचारबाट पन्छिने अधिकार छैन : सर्वोच्च अदालत
औपचारिक रुपमै स्थगित भयो ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’
घटना र विचार, न्युज डेस्क !6days ago March 25, 2020
कोरोना भाइरस (कोभिड–¬१९) को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्ने ३०० भन्दा बढी सवारीसाधनलाई प्रहरीले आज (१२ चैत) नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अटेर गरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेका साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले घरबाट अनावश्यक रूपमा निस्केका सर्वसाधारणलाई सम्झाई बुझाई घरतर्फ नै फर्काइएको बताए ।
अत्यावश्यक सेवा र अनुमतिपत्र लिएका सवारीसाधन मात्रै चलाउन पाउने नियम कडाइका साथ पालना गर्न लगाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । मङ्गलबार मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो । सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन मङ्गलबारदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ ।
दुई हजार वर्षमा महामारीबाट मर्ने एक अर्बभन्दा बढी
पीपीईको चिहान !
छुट्टाछुटै दुर्घटनामा तीनको मृत्यु तीस घाइते
चिताको दाउरा र कात्रोमा पनि ‘कमिसन’ खाने हामी अजम्बरी !
कोरोनाभाइरस अपडेट : विश्वभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७ लाख ३९ हजार, ३५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु